Fitafi Moramanga - Nizara fanomezana ho an'ny tokantrano sahirana 26
Fitafi Moramanga – Nizara fanomezana ho an’ny tokantrano sahirana 26
Publié décembre 22, 2020 par Book News
Ankizy sahirana sy tokantrano sahirana 26 no nisitraka ny fanomezana avy amin’ny fikambanana Fitafi Moramanga ny Talata 22 Desambra 2020.
Fizarana fanomezana nataon’ny Fitafi Moramanga
Nisy ny asa soa nataon’ireo mpikambana tao amin’ny Fitafi Moramanga ny Talata 22 desambra. cc: Toria Dimbiniaina
Ankizy sahirana sy tokantrano sahirana 26 no nisitraka ny fanomezana avy amin’ny fikambanana Fitafi Moramanga. cc: Toria Dimbiniaina
Taorian’ny hetsika sosialy nataon’ny Fitafi (FIraisankinan’ny Tanora Andrin’ny FIrenena) tao Antanimenakely Ampitatafika ny Sabotsy 12 desambra 2020, dia anjaran’ny tao Moramanga indray no nanohy ny asa soa. Nisy ny fizarana vary 1kg, siramamy 1kg ary menaka 1l ho an’ireo tokantrano sahirana 26 ao amin’ny Fokontany Besimpona Kaominina Moramanga, androany, Talata 22 Desambra 2020. Hetsika niaraha-miasa amin’ny Masoivohon’i Suisse eto Madagasikara.
Ankoatra izay, amin’izao vanimpotoana ny fankalazana ny Krismasy izao dia tsy noadinoin’ny Fitafi Moramanga ny nizara akanjo sy vatomamy ho an’ireo ankizy sahirana izay hiandraiketan’ny Pretra ao amin’ny fiangonana katolika Notre Dame de Mont Carmel ao Moramanga.
Ankoatra ireo sehatra maro efa nahafantarana azy hatramin’izay toa ny fampiofanana iisan-karazany ho an’ny tanora, ny fanabezana olom-pirenena vanona, ny fiarovana ny tontolo iainana, dia tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa ny fikambanana Fitafi Madagasikara izao asa sosialy. Marihina fa misehatra amin’ny fampanajana ny zon’olombelona sy ny fampandrosoana maharitra ny fikambanana.